Dowladda Kuwait oo ka digtay faragelin lagu sameeyo midnimada Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Kuwait oo kamid ah dowladaha Carbeed ee taageera Soomaaliya ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la dhowro midnimada iyo jiritaanka dalka Soomaaliya,isla markaana Qaramada Midoobey iyo Beesha Caalamka looga baahan yahay inay dhowraan.
La-taliyaha Wafdiga Dowladda Kuwait ee Golaha amaanka ee Qaraada Midoobey Nawaf Al-Ahmad ayaa ka digay in Soomaaliya lagu sameeyo faragelin siyaasadeed iyo mid dhuleed,waxaase uu soo dhaweeyey mudo kordhinta lagu sameeyey cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa uu sheegay isaga oo ka qeyb-galayay fadhigii ay yeesheen golaha Ammaanka ee Qaramada midoobey inay soo dhaweynayaan horumarka ay sameysay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay inay muhiim tahay in dowladda iyo dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka u mudoobaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sida loo gaari lahaa guulo waaweyn.
Sidoo kale Beesha Caalamka ayuu ka dalbaday in Soomaaliya laga taageero sidii ay xasilooni uga gaari lahayd dalkeeda islaarkaana uga gudbi lahayd caqabadaha dhinacwalba ka heysta.
Muxuu Axmed Madoobe uga digay Xubno kamid ah Maamulkiisa?